Izinkampani Ezisampula Izinkombandlela Zokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
Izinkombandlela Zenkampani Yesampula Yezenhlalo
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 7, 2015 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Ngenkathi ngenza ucwaningo ngencwadi, ngivelile ngaleli golide elincane elihle kusuka kulo IShift Communications PR eyisikwele blog… a Top 10 Social Media Guidelines. Bayibeka lapho futhi abadingi sici noma yini ukuze isetshenziselwe ukuthengisa.
Imihlahlandlela eyi-10 ephezulu yokubamba iqhaza kwemidiya yezenhlalo e- [Inkampani]
Le mihlahlandlela isebenza kubasebenzi [beNkampani] noma osonkontileka abakha noma abafaka isandla kuma-blog, ama-wikis, amanethiwekhi omphakathi, imihlaba ebonakalayo, noma olunye uhlobo lwe-Social Media. Noma ngabe ungena ku-Twitter, Yelp, Wikipedia, Facebook noma ku-Google +, noma ubeke amazwana kuma-blog wemidiya aku-inthanethi, le mihlahlandlela ingeyakho.
Yize bonke abasebenzi [beNkampani] bamukelekile ukuthi babambe iqhaza kwi-Social Media, silindele ukuthi wonke umuntu obamba iqhaza ekuhlaziyweni okuku-inthanethi aqonde futhi alandele le mihlahlandlela elula kodwa ebalulekile. Le mithetho ingazwakala iqinile futhi iqukethe okuncane okuzwakala ngokomthetho kepha sicela ugcine wazi ukuthi inhloso yethu yonke ilula: ukubamba iqhaza ku-inthanethi ngendlela enenhlonipho, efanelekile evikela idumela lethu futhi elandela uhlamvu nomoya womthetho .
Veza obala futhi usho ukuthi usebenza e- [Company]. Ukwethembeka kwakho kuzobonwa endaweni ye-Social Media. Uma ubhala nge- [Inkampani] noma umuntu oncintisana naye, sebenzisa igama lakho langempela, ubone ukuthi usebenzela i- [Company], futhi ucacise ngendima yakho. Uma unesifiso esinikeziwe kulokho enixoxa ngakho, yiba ngowokuqala ukusho kanjalo.
Ungalokothi uzimele noma [Inkampani] ngendlela yamanga noma edukisayo. Zonke izitatimende kufanele zibe yiqiniso futhi zingadukisi; zonke izimangalo kufanele zifakazelwe.
Thumela imibono ezwakalayo nenenhlonipho? ngamanye amagama, ngicela ungabi nogaxekile futhi akukho ukuphawula okungekho esihlokweni noma okuhlaselayo.
Sebenzisa ukuqonda nokuhlonipha okuvamile: isibonelo, kuhle ukucela imvume yokushicilela noma yokubika ezingxoxweni ezihloselwe ukuba zibe yimfihlo noma zangaphakathi ku- [Inkampani]. Qiniseka ukuthi imizamo yakho yokubeka obala ayephuli ubumfihlo be- [Company], imfihlo, kanye nemihlahlandlela yezomthetho yenkulumo yezentengiso yangaphandle.
Namathela endaweni yakho yobungcweti futhi uzizwe ukhululekile ukunikela ngemibono eyehlukile, ngazodwana ezintweni ezingezona eziyimfihlo e- [Inkampani].
Lapho ungavumelani nemibono yabanye, yigcine ifanele futhi ihloniphekile. Uma uzithola usesimweni esiku-inthanethi esibukeka sengathi siyaphikisana, ungazivikeli ngokweqile futhi unganqamuli engxoxweni ngokungazelelwe: zizwe ukhululekile ukucela iseluleko kuMqondisi we-PR kanye / noma ukuyeka ukuxoxisana ngenhlonipho indlela ekhombisa kahle i- [Company].
Uma ufuna ukubhala ngomncintiswano, qiniseka ukuthi uziphatha ngendlela efanele, unamaqiniso aqondile nokuthi unezimvume ezifanele.
Sicela ungalokothi uphawule nganoma yini ehlobene nezindaba zezomthetho, ukumangalelwa, noma amanye amaqembu [Inkampani] okungenzeka aphikisana nawo.
Ungalokothi ubambe iqhaza kwi-Social Media lapho isihloko okukhulunywa ngaso singathathwa njengesimo esibucayi. Ngisho nokuphawula okungaziwa kungalandelwa emuva kukheli lakho le-IP noma le- [Company]. Dlulisela yonke imisebenzi ye-Social Media ngezihloko ezibucayi ku-PR kanye / noma kuMqondisi Wezindaba Zezomthetho.
Hlakanipha ngokuzivikela, ubumfihlo bakho, kanye nemininingwane eyimfihlo ye- [Company]. Lokho okushicilelayo kufinyeleleka kabanzi futhi kuzoba khona isikhathi eside, ngakho-ke cabanga ngokucophelela okuqukethwe. I-Google inenkumbulo ende.
QAPHELA: Imibuzo ejwayelekile yabezindaba kumele idluliselwe kuMqondisi Wezobudlelwano Komphakathi.
Tags: imihlahlandlela yabasebenzi bezokuxhumanaimihlahlandlela yezokuxhumanaimithetho yezokuxhumana
I-2015 State of Digital Marketing
Umhlahlandlela Wokugcina Wokuqapha Idumela Lakho Eliku-inthanethi
Feb 8, 2010 ngo-5: 15 PM
UDrew ubeke uhlu olukhulu lwezinqubomgomo zeSocial Media ezivela ezinkampanini. http://bit.ly/bxKpbP